Istaraatiijiyadda «Isbeddel iyo dib u noqosho» macaash ku hel suuq kasta | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyadda «Isbeddel iyo dib u noqosho» macaash ku hel suuq kasta
Markaad ka fekereyso sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah , ganacsade waa inuusan aaminin fudeydkooda. Badhano waaweyn "CALL / PUT" ayaa sababa rabitaan deg deg ah oo la gujiyo oo si deg deg ah faa'iido looga helo. Natiijadu had iyo jeer waa isku mid-luminta dhigaalka. Ha iloobin in qalabka falanqaynta farsamada ee caadiga ahi keeni karo qiimo deggan. Ka faa'iideyso isbeddelka iyo dib u noqoshada, sida ku jirta istiraatiijiyadda "Isbeddel iyo Dib u laabasho".
Gator Oscillator . Waxaa abuuray Bill Williams oo ah nooc ka mid ah tilmaamaha Alligator. Casaan ka sarreeya iyo ka hooseeya heerarka eber waxay xaqiijineysaa hoos u dhaca, koritaanka cagaaran. Isbeddelka midabku waa sixitaan ama dib u laabasho degdeg ah oo ay tahay in lagu xaqiijiyo calaamadaha binary ganacsiga ee nool .
Tilmaamuhu lama heli karo dhammaan goobaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah . Xaaladdeenna, waxaan u adeegsanaynaa barnaamijka ganacsiga Deriv ee ka socda Binary.com. Haddii dillaalkaagu uusan lahayn tilmaantan, waad ku soo dejisan kartaa bilaash internetka oo waxaad u isticmaali kartaa meel kasta oo ganacsi oo kale (tusaale ahaan, MetaTrader) oo ah calaamado lagu furayo ikhtiyaarka koontadaada. Tilmaamuhu looma adeegsanaayo ganacsi ahaan sidii qalab madax-bannaan. Waxaa kaliya loo isticmaalaa iyadoo lala kaashanayo aaladaha kale ee falanqaynta farsamada.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Saddex Geesoodka ah (TMA). Tilmaamuhu wuxuu u eg yahay Bollinger Bands, laakiin waxaa lagu dhisay iyadoo lagu saleynayo kaliya celceliska dhaqdhaqaaqa, laakiin laba jeer celcelis ahaan celceliska dhaqdhaqaaqa. Tani waxay ka dhigeysaa tilmaamuhu mid aan xasaasi aheyn oo waxaad si sax ah u arki kartaa jihada iyo isbeddelada isbeddelka muddada-dhexe.
Ikhtiyaar u kac (WAC). Qiimuhu wuu ka sarreeyaa Celceliska Dhaqdhaqaaqa, Gator Oscillator waa cagaar oo wuxuu ka sarreeyaa heerarka eber.
FALL (PUT) option. Xaaladaha iska soo horjeedda - jaantus ka hooseeya Celceliska Dhaqdhaqaaqa, casaan Gator Oscillator.
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha binary. Waqtiga dhicitaanka ee xulashooyinku waa inaysan ka yarayn 5-7 daqiiqo xitaa haddii waqti cayiman la doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena.
Natiijooyinka xisaabinta TMA waxay ka sarreysaa celceliska qiimaha qiimaha waxayna aad ugu dhow yihiin jaantuska waqtiga yar, taas oo kordhinaysa tirada calaamadaha binary ee bilaashka ah. Celceliska Dhaqdhaqaaqa waa inuusan u shaqeyn sidaan oo kale xitaa haddii wax waliba ay ku wanaagsan yihiin xogta taariikheed - haddii ay jirto isdhexgal aad u dhow "kordhinta tirada xilliyada;
Waxaad si weyn u hagaajin kartaa natiijada xoqidda haddii aad falanqeyn ku sameyso waqtiyo badan oo isku mar ah. Tusaale ahaan, muddooyinka M5-M15 waxay ku siin karaan calaamado qarsoon oo isbeddel isbeddel ah, kaas oo markaa lagu xaqiijinayo heshiis ku saabsan M1.
Ganacsi otomaatig ah sida ku xusan «Isbedelka iyo dib u noqoshada» istiraatiijiyada waa suurtagal: dhowr nooc oo ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxaa laga heli karaa shabakadda, laakiin, sida nidaam kasta oo wax lagu nadiifiyo, way ka wanaagsan tahay in gacan looga ganacsado iyadoo la adeegsanayo qorshahan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wax ku ool ah u hagaajiso nidaamka isbeddelada suuqa, iyo hantida badan ee istiraatiijiyaddu waxay kuu dammaanad qaadaysaa inaad joogto u joogto maalin kasta.